Hawl-wadeennada Hoggaamiyayaasha Dhinacyada badan ee COVID-19: Dhibaatada sinnaan la'aanta tallaalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Hawl-wadeennada Hoggaamiyayaasha Dhinacyada badan ee COVID-19: Dhibaatada sinnaan la'aanta tallaalka
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Madaxda Sanduuqa Lacagta Adduunka, Kooxda Bangiga Adduunka, Ururka Caafimaadka Adduunka iyo Ururka Ganacsiga Adduunka ayaa la kulmay hoggaamiyeyaasha Ururka Tallaalka Tallaalka Afrika (AVAT), Afrika CDC, Gavi iyo UNICEF.
Kooxda dhinacyo badan leh ayaa wax ka qabata caqabadaha si degdeg ah tallaallada kor loogu qaadayo ee waddamada dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa hooseeya.
Inta badan waddamada Afrika ma heli karaan tallaal ku filan si ay ula kulmaan yoolalka caalamiga ah ee 10% caymiska.
Xiisadda sinnaan la'aanta tallaalka ayaa horseedaysa kala-duwanaansho khatar ah oo ku saabsan heerarka badbaadada COVID-19 iyo dhaqaalaha adduunka.
Kulankeedii saddexaad, Hawl-wadeennada Hoggaamiyayaasha Dhinacyada badan ee COVID-19 (MLT)-madaxda Sanduuqa Lacagta Adduunka, Kooxda Bangiga Adduunka, Ururka Caafimaadka Adduunka iyo Ururka Ganacsiga Adduunka-waxay la kulmeen hoggaamiyeyaasha Hay'adda Ka Hortagga Tallaalka Afrika (AVAT) , Africa CDC, Gavi iyo UNICEF si wax looga qabto caqabadaha hortaagan tallaalka si degdeg ah loogu dardargeliyo waddamada dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa hoose, gaar ahaan Afrika, waxayna soo saareen bayaankan soo socda
“Tallaalka caalamiga ah ee tallaallada COVID-19 wuxuu ku socdaa laba xawaare oo aad looga naxo. In ka yar 2% dadka waaweyn ayaa si buuxda loogu tallaalaa inta badan dalalka dakhligoodu hooseeyo marka la barbar dhigo ku dhawaad ​​50% dalalka dakhligoodu sarreeyo.
“Wadamadan, oo badankoodu ku yaal Afrika, si fudud uma heli karaan tallaal ku filan si ay ula kulmaan xitaa hadafyada caalamiga ah ee ah 10% caymiska dhammaan waddamada bisha Sebtember iyo 40% dhammaadka 2021, iskaba daa yoolka Midowga Afrika ee ah 70% sannadka 2022 .
“Qalalaasahaan ee sinaan la’aanta tallaalka ayaa horseedaysa kala-duwanaansho khatar ah oo ku saabsan heerarka badbaadada COVID-19 iyo dhaqaalaha adduunka. Waxaan bogaadinaynaa shaqada muhiimka ah ee AVAT iyo COVAX si ay isugu dayaan inay wax uga qabtaan xaaladdan aan la aqbali karin.
“Si kastaba ha ahaatee, si wax-ku-ool ah wax looga qabto tallaalkan aadka u yar ee sahayda ee dalalka dakhligoodu dhexdhexaadka yahay ee hooseeya iyo kan hoose, oo si buuxda u awoodsiinaya AVAT iyo COVAX, waxay u baahan tahay wadashaqayn degdeg ah oo ay yeeshaan soo-saareyaasha tallaalka, waddamada tallaalka soo saara, iyo waddammada horay u gaaray heerar tallaal oo sarreeya. Si loo hubiyo in dhammaan waddammada ay gaaraan yoolalka caalamiga ah ugu yaraan 10% daboolidda Sebtember iyo 40% dhammaadka-2021:
Waxaan ugu baaqeynaa waddammada qaatey tallaallada aadka u sarreeya inay ku beddelaan jadwalka dhalmada ee dhow COVAX iyo AVAT.
Waxaan ugu baaqeynaa soo -saareyaasha tallaalka inay si degdeg ah mudnaanta u siiyaan oo ay u fuliyaan qandaraasyadooda COVAX iyo AVAT, iyo inay bixiyaan saadaasha sahayda oo joogto ah oo joogto ah.
Waxaan ku boorineynaa G7 iyo dhammaan waddamada wax-qeybsiga inay si dhaqso leh u fuliyaan ballan-qaadyadooda, iyadoo la xoojiyay muuqaalka dhuumaha, nolosha wax-soo-saarka iyo taageeridda sahayda ku-meel-gaarka ah, maadaama 10% ku dhawaad ​​900 milyan oo qaddar go'an la qaatay ilaa hadda la soo diray.
Waxaan ugu baaqeynaa dhammaan waddamada inay tirtiraan xannibaadaha dhoofinta iyo caqabadaha kale ee ganacsi ee ku saabsan tallaallada COVID-19 iyo wax-soo-saarka ku lug leh wax-soo-saarkooda.
“Waxaan si barbar socda u xoojineynaa shaqadeena COVAX iyo AVAT si wax looga qabto bixinta tallaalka joogtada ah, soosaarka iyo arrimaha ganacsiga, gaar ahaan Afrika, iyo abaabulka deeqaha iyo maalgelinta dhimista ujeeddooyinkan. Waxaan sidoo kale sahamin doonnaa hababka maaliyadeed si loo daboolo baahiyaha tallaalka mustaqbalka sida uu codsaday AVAT. Waxaan u doodi doonnaa saadaasha sahayda iyo maalgashiyada si loo kordhiyo u diyaargarowga dalka iyo awoodda wax dhiska. Oo waxaan sii wadi doonnaa inaan kor u qaadno xogtayada, si aan u aqoonsanno meelaha bannaan oo aan u hagaajinno daahfurnaanta bixinta iyo adeegsiga dhammaan aaladaha COVID-19.
“Waqtiga ficilku waa hadda. Waddada masiibada - iyo caafimaadka adduunka - ayaa khatar ku jira. ”
Cuthbert Ncube, Gudoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika
Cuthbert Ncube, Gudoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika wuxuu yiri:
"Waxaan si buuxda u oggolaaneynaa inaan ugu baaqno dhammaan waddamada inay tirtiraan xannibaadaha dhoofinta iyo caqabadaha kale ee ganacsi ee ku saabsan tallaallada COVID-19 iyo wax-soo-saarka ku lug leh wax-soo-saarkooda."
“Waxa kale oo muhiim ah in dalxiisku uu qayb ka noqdo dooddan. Dalxiisku waa warshad lagama maarmaan u ah dalal badan oo Afrikaan ah. ”